Etu esi wụnye WhatsApp na PC | Site na Linux
Esi wụnye WhatsApp na PC gị
Ọ ga-amasị gị inwe ike jiri WhatsApp na kọmputa gị mana imaghi etu esi ebudata ya? Wụnye WhatsApp na PC Ọ dị nnọọ mfe! Naanị ịgbaso usoro ndị a ma ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ngwa ahụ na desktọọpụ gị na laptọọpụ gị.
Ihe achọrọ iji nwee ike iji WhatsApp na kọmputa gị:
Kọmputa, ofu ma ọ bụ obere, yana sistemụ arụmọrụ Windows.
Ọrụ internet njikọ.
1 Esi wụnye WhatsApp na PC gị
2 Video banyere Otu esi etinye WhatsApp maka PC
Esi wụnye WhatsApp na PC gị site kapeeti
Agbanyeghi na otutu uzo iji ngwa a, ihe kachasi nma ma di mfe bu iji BlueStacks.
Kwụpụ 1: Budata BlueStack (ngwa efu maka Windows)
Budata BlueStack maka Windows
Kwụpụ 2: Mgbe ịmechara nbudata ahụ, mee doble pịa na faịlụ ebudatara. Mgbe nke ahụ gasị, pịa bọtịnụ ahụ Gaa n’ihu. Iji rụchaa, pịa Wụnye.
Kwụpụ 3: Mgbe nke ahụ gasị, budata faịlụ WhatsApp APK.
Budata WhatsApp APK faịlụ.
Kwụpụ 4: Mgbe ịmechara faịlụ ahụ, pịa ya ugboro abụọ.
Kwụpụ 5: mgbe nke ahụ gasị, a ga-etinye ya WhatsApp na kọmputa gị.
Kwụpụ 6: Mgbe ahụ abrna BlueStacks (usoro kachasị ọsọ bụ ịpị aka abụọ na ụzọ mkpirisi nke a ga-eme na desktọọpụ gị)
Kwụpụ 7: Ugbu a BlueStacks >> Pịa na Ngwa m.
Kwụpụ 8: Na ndepụta ahụ ị ga-ahụ akara ngosi WhatsApp >> Pịa na ya.
Kwụpụ 9: Nabata usoro na ọnọdụ ha chọrọ. Kwesịrị ile anya iji hụ ma ọ dị gị mma na ha tupu ịmalite iji ngwa ahụ.
Kwụpụ 10: Tinye nọmba ekwentị ịchọrọ iji. Cheta! Willgaghị enwe ike iji ọnụọgụ ndị nwere akaụntụ WhatsApp emetụtara.
Mara: have ga- abanye koodu obodo gị tupu ị banye mkpụrụ itolu nke ekwentị mkpanaaka gị. N'ihe banyere Spain, + 34.
Kwụpụ 11: Ugbu a WhatsApp ga-anwa ịchọpụta nọmba gị, mana ozi njehie ga-apụta.
Kwụpụ 12: Ugbu a, pịa Kpọọ m >> Mgbe nke ahụ mechara, pịa "Kpọọ m" (ma ọ bụ Na-akpọ m, dabere na mbipute). Ga-enweta oku akpaghị aka na ọnụọgụ nkwenye. Cheta ịchekwa nọmba ahụ! Anyị na-akwado ka ị dee ya na akwụkwọ ma ọ bụ na faịlụ Okwu.
Kwụpụ 13: Ugbu a, pịnye nọmba natara na mpaghara nkwenye ma ọ bụ ya!
Kporie WhatsApp maka kọmputa, laptọọpụ ma ọ bụ desktọọpụ!
Video banyere Otu esi etinye WhatsApp maka PC
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Esi wụnye WhatsApp na PC gị
Achọrọ m ibudata whatsapp maka pc m
Ka anyị hụ nke a bụ linux blog, ọ bụrụ na nke a na-arụ ọrụ na windo ka ị biputere ya ?????
«SITE LINUX» ...
Rebecca Daniela dijo
Kedu ka m ga - esi budata ya ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ikuku anaghị emebi maka Linux
Zaghachi Rebeca Daniela
kpọrọ? Ejighi ya ibudata ya na Linux, ekwesiri inwe ike iwunye ya na Linux ma ha puta na iyi slime nke diri windows -.-
Aghọtara m na ha achọghị ịbụ ndị Windows haiters, mana dịka ha kwuru na blọọgụ a bụ Linux, ọ bụrụ na ha chọrọ ime ya mana maka sistemụ arụmọrụ maka ezigbo ibi
Zuum ma ọ bụ ZTE ekwe ntị
Otu esi eme ka oku WhatsApp rụọ ọrụ